मतदाता नामावली हाम्रा कुरा : hamrakura.com
स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँले मत खसाल्ने ठाउँ कहाँ हो ?
(वुथको जानकारी सहित)
काठमाडौं। आगामी बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले मत हाल्न पाउनु हुन्छ कि पाउनुहुन्न ? यस बारेमा तपाई अब जानकार हुन जरुरी छ । मत खसाल्न निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने अनिवार्य छ। परिचयपत्र छैन भने मत खसाल्न पाइन्न । मतदाता परिचय पत्र पाउनको लागि पनि निर्वाचन आयोगको मतदाताहरुको सूचीमा तपाईको नाम अनिवार्य रुपमा समावेश भएको हुनुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाताको नामावली निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेभसाईटमा राखेको छ । त्यो भन्दा पनि सहज रुपमा तपाईँले आफ्नो नाम नामावलीमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि तल उल्लेखित शर्तहरु पूरा गर्नसक्नुहुने छ । तपाईंको नागरिकता रहेको जिल्ला कुन हो त्यो जिल्ला सबैभन्दा पहिले छनोट गर्नुहोस् । त्यसपछि आफू बस्ने गाविस वा नगरपालिकाको नाम छान्नुहोस्। याद गर्नुहोला यो पुरानो संरचनामा तयार पारिएकोले पुरानो गाविस या नगरपालिका चयन गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि तपाईको परिवारले यस भन्दा अघि कुन विद्यालय वा अन्त कतै गएर भोट हाल्ने गर्नुभएको थियो । त्यहि स्थानको नाम त्यहाँ पाउनुहुनेछ । त्यस नामभित्र गएपछि त्यहाँ आफ्नो जन्ममिति वा नागरिकता नम्बर राख्नुहोस् । त्यसो गर्दा तपाईँले आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम भएको या नभएको स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ । अद्यावधिक गर्ने क्रममा कहिलेकाहि नामावली अन्त पर्ने वा छुट्ने कारणले पनि तपाइ आफ्नो नामावली र वुथको बारेमा अहिल्यैदेखि ढुक्क हुनुहोस। यसका लागि तलको वक्समा गएर आफ्नो जानकारी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
बिज्ञापनको लागि: marketing@hamrakura.com
Copyright © 2017 hamrakura.com. All rights reserved.